हरेक देशभक्त नागरिकले हेर्नैपर्ने भिडियो संवाद ! ‘ग्रेटर नेपाल संम्भव छ’
यस्ता छन् कानुनी आधारहरु…
प्रकासित मिति : २०७७ असार २९, सोमबार प्रकासित समय : १४:१६
(पछिल्लो सयम निक्कै चर्चामा रहेको भारतीय मिडियाहरुलाई नेपालमा प्रसारण रोक्ने विषयले हरेक नागरिकको समर्थन पायो । त्यो निर्णयसँग सामाजिक सञ्जालबाट नागरिकले सकारात्मक कदमको रुपमा टिप्पणीहरु गरे । यसका दुई देशिय प्रभावको विषय के कस्ता छन त्यसमा भने थप समिक्षा आवश्यक होला । त्यस्तै पछिल्लो समय भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्रमा गरेको अतिक्रमणको सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै उचित जवाफ दिएको छ । तरपनि भारतले हाम्रो देशको पारस्पारीक विदेश नीतिको तहमा घुसेर मिडिया मार्फत अनगर्ल प्रचारहरु जसरी गर्यो त्यसबाट आम देशभक्त नेपाली जनताहरुले भारत विरोधी बन्ने संकेत देखिराखेको छ । यो अस्थाले विशाल नेपाल निर्माणको सामाजिक अभियानलाई के कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने विषयमा आज हामी गम्भीर छलफल गर्दैछौं । त्यसका लागि हाम्रा सम्पूर्ण दर्शवृद, पाठकहरुलाई निरन्तर हामीसँग जोडिन अनुरोध सहित ग्रेटर नेपालको अभियानबारे केन्द्रीत छलफलको लागि हाम्रा अतिथि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल सहित तपाईहरुमाझ उपस्थित भएका छौ । बाँकी भिडियो संवादको सम्पादीत कुराकानी सहित जस्ताको तस्तै भिडियोमा समेत हेर्नुहोस र प्रतिकृया दिन सक्नुहुनेछ ….)
१) आराम हुनुहुन्छ ? आजभोलि के गरिरहनुभएको नयाँ ?
–हामी यतिबेला नेपाल र भारतको सञ्चार जगतको द्धन्दमा छौं । त्यहि सन्दर्भमा हामीले विज्ञप्ती समेत जारी गरेका थियौं । यतिबेला हामीले मुख्यतः दुई विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छौं, सरकारले ल्याएको नयाँ राजनीतिक नक्सा र त्यसबाट असन्तोष बन्दै आएको भारतीय सरकार र मिडयाको नेपाल विरोधी कुप्रचारको विषय । हुन त अहिले लिम्पियाधुरा समेत जोडिएको नेपालको चुच्चे नक्सा पहिलो पटक आएको भनिन्छ तर हामीले विद्यार्थीकालमा पनि त्यो चुच्चे नक्सा देखेको हो, त्यसलाई पछि तोडमोड गरिएको हो । त्यो २०३२ सालमा बनाइएको थियो । भारतले हाम्रो भूभाग समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको करिब ८ महिनापछि नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई समेटेर आफ्नो नक्सा ल्याएको छ । त्यसैगरी नेपाली युवाहरु जो भारतीय सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरु भारतीय पक्षबाट कस्मिर लगायतको पाकिस्तानसँगको विवादीत क्षेत्रमा लड्नुपर्ने, भारतको लागि मर्नुपर्ने अवस्थामा छन । यसरी भारतले एकातिर हाम्रो भूमिमा कब्जा जमाउँदैछ र अर्कोतिर रोजगारको नाममा नेपाल र नेपालीसँग कुनै विवाद नभएपनि पाकिस्तान र अन्य पक्षसँग नेपाली युवाहरु लड्नुपर्ने, भिड्नुपर्ने अवस्था जो देखिराखेको छ । हामी यि तमाम विषयमा गम्भीर अध्ययन गरिरहेका छौं ।
२) नेपालको कुटनीतिक विदेश नीतिमा हमला गर्दै भारतीय मिडियाहरुले जसरी सरकार र सिंगो नेपालमाथीको अफवाह फैलाउने काम गरे, त्यसलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
–भरतले पछिल्लो करिब ७० बर्षदेखि नेपालको स्वतन्त्रतामाथी निरन्तर हैकम लाद्दै, हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । मुलुकको आन्तरिक मामिलामा भारतीय पक्षले सुक्ष्म रुपमा प्रवेश गरेर हमला गर्दै आएको छ । मन्त्री बनाउनेदेखि अन्य अन्य प्रशासनिक निकायको आन्तरिक काममा समेत भारतले घुमाउरो ढंगले प्रभाव पार्दै आएको देखिन्छ । हुनत म भारतलाई इन्डिया भन्न चाहन्छु किनकी भारतलाई उसले भारतबर्षको इतिहासलाई जोडेर त्यसमा नेपालसमेत रहेको भन्ने अपब्याख्या समेत गर्दै आएको छ । तर उसले बेलायतको इष्ट इन्डिया कम्पनिसँगको उपनिवेश बेहोरेपछि सुगौली सन्धीबाट मुक्ति पाएको हो, त्यसकारण त्यो इन्डिया हो । हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्रीको अगाडी खुट्टा हल्लाउँदै हेपाहा सैलीमा वालुबाटारमा भेट्ने, हामीलाई आफ्नो एक प्रान्तको जस्तो नजरले हेर्ने भारतीय राजदूतहरुलाई हामीले देखेका छौं । जब कि संयुक्त राष्ट्र संघको लागि सबै मुलुकहरु सदस्य राष्ट्र हुन, तर पनि भारतले हामीले छोटा भाईको रुपमा हेप्ने गरेको छ ।
पछिल्लो चरणमा नेपालमा चीनको दुतावसको सक्रियता बढेपछि भारतले आफ्नो एकछत्र प्रभावमा चीनले समस्या पार्ने सोचले नेपाल सरकारको काम, गतिविधिमा कुप्रचारको हमला गर्यो । भारतीय मिडिया त्यहाँको सरकार र सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल विरुद्ध अफवाह फैलाएका हुन । मातिएको मानिसले जसरी मनमर्जि बोल्छ, गर्छ त्यस्तै मातमा रहेको भारतीयले सञ्चारक्षेत्रको संहिताको समेत ख्याल नगरि अफवाह फैलाउने काम अचेतन रुपमा गरेको देखिन्छ । यसको विरुद्ध नेपालमा भारतीय मिडिया बन्न गर्ने निर्णय उचित छ । भारतले जस्तो हेपाहा काम चीनले गरेपनि त्यो स्किार्य हुन्न । हामीले सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिने हो ।
३) भारतीय पक्षले जहिले पनि नेपाल र नेपालीलाई ब्यवहारमा हेप्ने र रुपपक्षमा छिमेकी सम्बन्धको माला जप्ने गरेको छ, उसको विस्तारवादी नीतिका कारण विशाल नेपालको ३ लाख ६८ हजार वर्ग किमि भन्दा बढि क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपाल दिनानुदिन घट्दै छ, यसबारेमा के भन्न हुन्छ ?
–तपाईले दिएको तथ्याङक टिष्टादेखि काँगडासम्मको हो । पछिल्लो चरणसम्म आउदा नेपालको क्षेत्रफल दिनानुदिन घटिरहेको छ । लिम्पियाधुरासम्म आउँदा करिब करिब ४०० वर्ग किमि क्षेत्रफल घटेको छ । त्यसगरी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले मेचीमहाकालीबाट करिब ६०० वर्ग किमि जमिन घटेको बताउनुभएको छ । हाम्रो अध्यनमा पनि पूर्वतर्फ करिब ३०० वर्ग किमि क्षत्रफल घटेको छ । हामीले अहिले नेपालको क्षेत्रफल १,४७, १८१ वर्ग किमि पुग्छ कि पुग्दैन नक्सामा नापेर देखाउनुस भन्दै नापी विभागसँग सोध्दा सरकारको तथ्याङमा जंगल लगायतको जमिनको क्षेत्रफल नराखेको कारण कम देखिएको बताइएपनि त्यसमा सत्यता पाइएन । यसरी मुलुकको क्षेत्रफल घटेको छ तर पनि नेपाल सरकार किन चुप छ, यो गम्भीर प्रश्न हो ।
यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले एक इन्च जमिन पनि कम हुन दिन्न भने, नेपाली सेनाले मुलुकको सीमाना आक्रमण नसहने बताउँदै आएको छ तर व्यवहारमा सीमाको रक्षामा चासो देखिएन । प्रधानमन्त्रीले मैले नयाँ नक्सा निकालेको कारण भारतले मलाई हटाउन खोज्यो भन्नुभाछ, त्यसमा हाम्रो कुरा अब ग्रेटर नेपाल पनि कायम गछौं भन्नुस भन्ने छ, तर उहाँ किन भन्नुहुन्न ? अर्को कुरा सुगौलि सन्धी मान्दैनौ भनेर नेपाल र भारतले सहि गरेका छन, सुगौलि सन्धीमा पनि बेलायत फर्कदा खारेज भैसकेको जनाएको थियो, त्यसकारण सरकारले विविध कानुनी आधारबाट सरकारले त्यो हाम्रो जमिन भारतबाट फिर्ता माग्न सक्नु पर्छ, अन्यर्था देशभक्त जनताहरु भारतको सीमा मिचाह प्रवृति विरुद्ध संगठीत विरोध गर्नेछन ।
४) भारतले गरेको मिडियाको अनगर्ल हमलाको घटनापछि नेपालमा दुर्दशन बाहेकका भारतीय मिडियाहरुको प्रशारण रोक्ने भनियो, यसले दुई देशिय सम्बन्धलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? विशाल नेपाल निर्माणको अभियानमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
-एक दुईजना मिडियाले माफि पनि मागिसकेका छन । मिडिया त्यहाँको सरकार र कानुनभन्दा माथि हुदैन । भारतीय मिडियाहरुले त्यहाँको सरकारको निर्देशनमा नेपाल विरुद्ध कुप्रचार गरेको हो । उसले सञ्चार संहिता मान्नुपर्दैन, जे मन लाग्यो लेख्ने ? यो मिडियाको हमललाले दुई देशिय सम्बन्धलाई अहिले प्रभाव पारेको छ ।
५) तपाईले जहिले पनि विशाल नेपाल कायम गर्न सम्भव छ, भन्दै आएको सुनिन्छ, आज हाम्रा दर्शकहरु र आम नेपाली जनसमूदायलाई बुदागत रुपमा भन्दिनुस त हामीले विशाल नेपाल फिर्ता पाउने कानुनी आधारहरु के के ?
–यो निक्कै राम्रो प्रश्न हो । यसले ग्रेटर नेपाल निर्माण अभियानको गतिविधि बुझाउ सहज हुन्छ । राणाकालमा ब्रिटिस फिर्ता जाँदा नेपाली भूमि फिर्ता माग्दा माहात्मा गान्धीले ठिक छ जमिन लिनुस, त्यो तपाईको हो तर अहिले सजिलो छैन भन्ने तर्क गरे । जब कि ब्रिटिस साम्राज्व्यवाद विरुद्ध भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालीले भारतलाई सघायो, तर भारतले आफ्नो स्वतन्त्रतापछि पुन नेपालमाथि नै हैकम जमायो, यो कारण गान्धीलाई म घृणा गर्छु । त्यस्तै ब्रिटिस पार्लामेन्टले भारतलाई दुई देश इन्डिया र पाकिस्तान बनायो । यसरी सुगौली सन्धीको खारेजी हुदा सबै भूमि जस्को हो त्यहि देशले लिने भनिएको छ । यति यि सबै विषयलाई नमान्ने हो भने पनि सन १९६० मा संयुक्त राष्ट्र संघले प्रस्ताव नम्बर १५१४ अनुसार संसारभरका उपनिवेश ध्वस्त हुनुपर्छ अब कहिपनि उपनिवेश कायम गर्न पाइदैन भनेको छ । अनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्टहरु नेपाल, भारत बेलायत सबै हुन, अब त्यो उपनिवेश कायम गरेको हेरेर बस्ने ? अब ति विविध कानुनी आधारमा हामीले हाम्रो जमिनको खोजि गर्नुपर्छ । सरकारले पहल गर्ने हो भने ग्रेटर नेपाल कायम गर्न सम्भव छ ।
६) भनेपछि हामीले खोज्ने हो भने विशाल नेपाल कायम गर्न सम्भव छ, तपाईको प्रष्ट मत हो यो । यसका लागि तपाई भविष्यमा खुट्टा कमाउने सम्भावनालाई कसरी तर्क गर्नुहुन्छ ?
-हो, सरकारले यो मुद्दालाई समात्ने हो भने यो मुद्दालाई अन्तराष्टियकरण गरेर भएपनि ग्रेटर नेपाल कायम गर्न सम्भव छ । यसका लागि आम नागरिकहरुले आ आफ्नो ठाउबाट निरन्तर आवाज उठाउन आवश्यक छ । यो अभियानबाट म र मेरो खुट्टा काप्ने, त्यो कदापी हुदैन । मैले पटक पटक भनेको छ, ग्रेटर नेपाल कायम गर्नको लागि म अन्तिम सम्म तयार छु । यो विषयमा म भारतीय वा हरेक पक्षसँग कानुनी आधार र तर्कबारे छलफल गर्न तयार छु । हमी सबैको आवाज र भूमि फिर्ताको संघर्षबाट यो अभियान सफल हुने सम्भावना प्रवल छ ।
७) अब हामी कार्यक्रमको अन्यत्यतिर छौं । सर अन्यमा सम्बन्धीत विषयवस्तुबारे केही कुरा छ भन्ने भन्नुस ।
-धेरै कुराहरु राख्ने मौका पाइयो । अन्त्यमा यो ग्रेटर नेपालको विषय मेरो ब्यक्तिगत कुरा होइन यो आम देशभक्त नेपाली नागरिकको चासो, चिन्ता र अन्तरहृदयको कुरा हो । यसमा हामी सबैले चासो राख्दै ग्रेटर नेपालको इतिहास पुन स्थापीत गराउन सहयोग गरौं । म सबै समर्थक, देशभक्त नागरिकलाई यो अभियानमा आ आफ्नो ठाउँबाट सहयोग, समर्थनमा जुट्न आह्वान गर्न चाहन्छु ।
हुन्छ सर, अमूल्य समय र मोर्चाको तर्फबाट धारणा राख्नुभयो, धेरै कुराहरु आम नागरिकमाझ बुझाउन कोसिस गर्नुभयो । यहाँलाई हाम्रो मिडिया टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ।